Abaaraha Soomaaliya waxay yareeyaan cuntada waxayna sababaan dhimasho | Saadaasha Shabakadda
Abaaraha ka dhashay isbeddelka cimilada ayaa saameeya dalalka adduunka. Si kastaba ha noqotee, waddamadaas kuwa aan horumarsanayn oo u nugul, waxay ku saameysaa iyaga qaab ka sii burburin badan
Soomaaliya gudaheeda, ilaa 196 qof ayaa u dhintey abaar illaa iyo sannadkan biyo la’aan darteed. Xafiiska Isuduwidda Bani'aadamnimada ee Qaramada Midoobay (OCHA) ayaa ka digay sida abaartu u daran tahay maamulladana waxaa lagu qasbay inay ku dhawaaqaan xaaladda "musiibo qaran."
1 Abaarta daran ee ku dhufatay Soomaaliya
2 Biyo la’aanta iyo cudurada oo kordhay
Abaarta daran ee ku dhufatay Soomaaliya
Biyo yaraanta awgeed, qiimayaasha isla isla kororka ah iyo bulshada ayaa lagu qasbay inay maciinsadaan ilo biyood khatar ah oo aan biyuhu ka cabi karin ama aan la daweyn. Waxaas oo dhami waxay kordhiyaan halista cudurada sida daacuunka iyo shuban biyoodka.
Iyada oo 196 qof lagu dilay kow iyo toban gobol oo dalka ah iyo in kabadan 7.900 oo qof oo uu saameeyay daacuunka dillaacay, xaaladda masiibada qaran ayay masuuliyiintu ku dhawaaqeen.
Biyo la’aanta iyo cudurada oo kordhay
Sida ay sheegeen mas'uuliyiinta Soomaaliya, xaaladdu way ka sii daraysaa maalin kasta gobolkan. Mid ka mid ah caqabadaha ugu waa weyn ayaa ah xaddidaadda helitaanka gargaarka bani'aadamnimada iyadoo ay ugu wacan tahay joogitaanka kooxda argagixisada Soomaaliya ee Al Shabab, oo maamusha deegaanno badan oo ku yaal koonfurta iyo bartamaha dalka.
Qiyaastii 3 milyan oo Soomaali ah ayaa ku sugnaan doona xaalad deg-deg ah oo xagga cuntada ah bisha Juun ee sannadka 2017-ka iyo hal tallaabo oo ka baxsan macluusha sababo la xiriira abaarta daran ee la diiwaan-geliyey bilihii la soo dhaafay, sida ay sheegtay UN
Maaddaama roobabku ka yaraanayaan Soomaaliya Waxsoosaarka cuntada waxaa hoos udhacay 70% meelaha qaar ee gobolka. Tani waxay sababtaa sicir barar iyo macaluul khatar ku ah caafimaadka dadka oo dhan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Abaaraha » Abaaraha Soomaaliya waxay yareeyaan cuntada waxayna sababaan dhimasho
Spain waxay ubaahantahay 300.000 oo gaari koronto ah sanadka 2020 si ay ula dagaalamaan isbedelka cimilada
NOAA waxay kahelaysaa sawirada hillaaca markii ugu horeysay dayax gacmeedka GOES-16